Daawo: Hargeysa oo Lagu Qabtay Shir looga hadlay Somaliland 27-sano kadib | KALSHAALE
Daawo: Hargeysa oo Lagu Qabtay Shir looga hadlay Somaliland 27-sano kadib
Oct 10, 2018 - 11 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Waxaa magaalada Hargeisa ka Qabsoomay Shirwayne looga hadlay Waxa Somaliland u Qabsoomay 27-sano kadib oo Aqoonsi ay Raadinayso iyo Waxyaabaha Hortaagan.
Shirkan ayaa waxaa k ahadlay Masuuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay Madaxwaynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Somaliland oo sheegtay inay Soomaaliya Inteeda kale ka goosatay ayaan helin wax Ictiraaf ah, Iyadoona aysan Hada muuqan Qaabkii Arintaasi ay ku heli lahayd, Sida uu Faysal Cali waraabe madasha ka sheegay.
Shikina qabsada xor ayaad tihiine balse waxuu quseeya inta bewshu degto aka Hargeysa iyo Burco kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkklllk Waxba gobalaa nalaku haysta haku walanina dadkan aad sgirisen wey ogyihiin dhulkaas ineydan degin dadkuna idin rabin.
Hatigu haydiin danveeye bal haydinka ogaladeen Samroonka iyo Ciisuhu inaad dawlad gaar ah aad noqotaan may ogla o inaad wali cas wadaan wey ogyihiin kkkkkkkkkkklkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Horaa Somaliland u soconaysaa. Mahadsanid mudane madaxwey!
Adiga Somali Girl baa ku fashilisay inaad jiis tahay.kkk
Dagaal uma adkaysan kadhid 2 saac ka badan. Qofka ugu horeeya ee cararayaa waa adiga. Ka ugu horeeya ee aan qabtaana waa adiga!
Isgaabi yaa afka nool.!
Jiisnimadii carab la, aan baad ku darsatay. Bal dib u akhri comment-ka aad dusha ku qortay. Lama fahmi karo.
Mise boowe waad argagaxday!kkkk
Qarjab baa yaabay.
Gaas Uus buur waxuu rabaa in ciidanka Somaliland ay dagaal ku qaadaan Puntland, si uu cimri dherer uga dhigto. Somaliland waa fahansantay arinkaa. Dhulbahante waa fahmay intii uu huuhaada iyo hilib noo keena ku khalday. kkk
Raga shicibka ah ee 9 bilood ka hor Gaas ugu soo gurmaday tolaay yaa Daarooda mid walba gurigiisa ayuu ku noqon. Waayo Gaas huu haadiisa iyo maskaxdiisa madhan bay ogaadeen!
Waxase Gaas ka sii daran wasiiro tv-ga maalin kasta kaga dhaaran jiray 24 saac baan Tuka-raq, Laascaanood iyo Burco ku qabsanaynaa. Waa ku ciidaynaa beri….
Waxaan ugu taag waayey madaxweynaha iyo wasiirkiisa arimaha dibadda waar markasta oo aad bulshada jam somland iyo beesha caalamka aad la hadlaysaan adeegsa jam somland ? Tallaahaan ku dhaartay inaan kaftamayn kii runta doonayow waydiiso nuqulo wepsite kalshaalle oo ah saxib aan ku qoro fikirkayga kuma qoro meel kale
Waxaan iswaydiiyaa waar kalmadan aad u sheegaysaa ma xumee nimanku ma waxay leeyihiin siduu wax noogu sheegaa isagoo noogu qoraya wepsite ka kalshaalle? Anna waa iga ballan inaan ku qoro fikirkayga iyo wax sheegayga kalshaalle? Maaha kalmad xun musane biixi iyo shire ? Waanad qaadataan waxaan idiin sheego ilaa aaffo group oo ahaa tiimkii siiraanyo ee abaallaawayaasha ahaa ? Sistamkay ku shaqaynayeen oo dhan baan u qoray mana qoomamaynayo waayo waxaan ahay nin u shaqeeya dalkiisa ee ma ihi nin u soo shaqo tegay sidoodii oo xaraashay dalkii
Sidaan u difaaco dalkan iyo dadkiisa qaranimada jam somland wacyi galinta ummadda jam somland? Waxaa iiga maraga kalshaalle iyo inta caafimaadka qabta ee aragtida dheer? Madaxweyne dal baad ku dacwiyaysaa inaad tahay waanad ka tagaysaa wixii furaha u ahaa oo ah jam somland ama republic of somland? Maayanay adiga iyo shire idin qabanayn maahmaahdii ahayd (yiqra wa yinsa) oo wuu akhriyayaa waanu iloobayaa ama ilawsanyahay) tan danbey sax ku tahay turjumad ahaan waxaad rabtaan waa dal xora sheeg marwalba tilmaantiisii madaxweyne iyo wasiir sacad waa idinka garasho darro xilna waad noo haysaan haye?
Ugu danbayntii mudane madaxweyne iyo wasir shire dimuraadiyadaa dhigaysa inaan idin canaanto ? Laakiin aanan idin caayin? Na amaana oo ceebtayada ha sheegina dimoqradiyadna maaha dhaqan reerka ahna maaha xilbaa idin saaran wayn nin idin jecel iyo ku idin neceb? Idinkaa hogaankii dalka haya ? Dadaalkiinnuna waa yaryahay dhaliishiinuna way badan tahay ? Ula socda sidaa aduunka aan kaga dayanno roru socodka iyo waxqabadka iskuna kalsoonaada waxa fiicanna qaata ilayn waxan aan qorayo waa la arkaa inaad qaadataan ood u baahan tihiine ha noqonina sida sakaaraddii xaarka muuqda aasaysay? Miyaanay ahayn biixi iyo shiroow aad baan idin salaamayaa ee ha iloobina jam somland markastood hadlaysaan? Shacabkana mid idiin codeeyey iyo mid idinka codeeyeyba waxaad u tahay madaxweyne!? Ogow
Salaan sare inaadeer.
Madaxda dalka Somaaliland baan arkay adoo meeshan fariin u mariya. Wadadaa kula leexatay inaadeer, aan ku saxo. Waa hdaad Somalilander tahay
1. Maqaaxida kalshaale.ca ma joogaam madaxda Somaliland, fariin aad u marisayna ma arki karaan..
Ugaas Ciise Binu Axmed, Somalilander, Aarka Hargaysa yo anoo ah Laalays ayaad wixii cabasho ah u soo gudbin kartaa.
Qoraalka Gaabi, kana dhig mid tayo leh.
@runta ayaad Ka hadashay @gaas Waa tuug wuxuuna rabaa inuu kursigiisa Ku ilaashado sheeka baraleyda uu Tvga garowe ka aqriyo wuxuuna raba inuu xoolaha @maxud garaad Halkaa Ku jaqo marka busaaradu so foodsaarto @dhulbahante arinka Hada si fiican ayu ugu baraarugay anaguna kuma jirno huuhaa danbe @Mj ceebtooda maalinba intay dhagax so tuuraan ha ordaan @anagu waxaanu naqaana dhimasho iyo nolol Lkn Waxan la yaabanahay reer dhan oo shaqo Ka dhigtay iney isdaba yaacaan oo maalinba dhinac loo baacsado kuwanu @darood iyo harti midna maaha Waa garac fuleynimo ku caanbaxay.wbt